Ambatondrazaka: miandrandra ny filoha ho lany | NewsMada
Ambatondrazaka: miandrandra ny filoha ho lany
« Niato tsy nivarotra vary izahay fa miandry ny hataon’ny filoha ho lany eo », hoy ny mpamboly vary, anisan’ny nahavoly betsaka ao Anosindrafilo-Ambatondrazaka.
Tafakatra 1 000 Ar teo aloha teo ny kilaon’ny akotry. Nidina 850 Ar na 820 Ar izany. Ny ampombo 600 Ar , nidina ho 500Ar. “Faniriako ny hahamarin-toerana ny fitondrana ho avy eo. Mba mazava ny tokony hatao. Fa raha fitondrana mitsingevaheva, na ny fomba fameloman-tena koa aza, mety tsy hitombina”, hoy ny tantsaha iray.
Nisy ny nanampin-tsofina, nisy ny nanaja tena niala, nandeha nody, niala ny biraom-pifidianana nandritra ny fanisam-bato satria maloto loatra ny teny nifamalian’ireo mpomba ireo kandidà roa mitarika. Ny isam-bato rahateo, nifakaiky ny an’ireo kandidà roa ireo. Raha ampifandraisina amin’ny zavatra antenain’iry tambanivohitra mpamboly izany rivotra mitsoka izany, toa mahabe fanahiana na hisy na tsia ny fihodinana faharoa.
Mitodika any amin’ ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika miisa anjatony ny raiamandreny anisan’ny niala ny fanisam-bato tao Ambatosoratra. “Toa asan-dry zareo ireny anie ny manabe vahoaka mba tsy hitrangàn’ny tahaka izao?”, hoy izy.